Usoro okpomọkụ na-enye ume ọhụrụ nke nyiwe na-enye | Bezzia
Susana godoy | 21/06/2022 14:00 | Akụkọ
Anyị na-ahụ n'anya usoro okpomọkụ mgbe oge a rutere. Dị nnọọ ka anyị na-achọ itinye onwe anyị n'ime oge Krismas na njedebe nke afọ, ugbu a, anyị na-agbanwe ihe niile maka ebe paradaịs ndị ahụ, nnukwu osimiri ndị ahụ na ihu igwe ahụ dị mma. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị ka nwere ezumike, ị nwere ike ịmasị gị ịnụ ụtọ usoro ndị ọzọ nke nyiwe na-enye gị.
Ebe ọ bụ na ha zuru oke iji mee ka agụụ gị dị ụtọ ezumike okpomọkụ na-esote dị nso n'akụkụ. Usoro okpomọkụ nke anyị chọtara nwere atụmatụ ga-ejide gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ụdị isiokwu dị iche iche. Yabụ, ọ bụ oge ịkụ nzọ na nke ọ bụla n'ime ndị anyị kwuru n'okpuru.
1 oge okpomọkụ m hụrụ n'anya
2 Ọdọ Mmiri ahụ
3 ihe ịma aka okpomọkụ
4 Oge okpomọkụ
oge okpomọkụ m hụrụ n'anya
Otu n'ime usoro isiokwu a na-ekwukarị bụ nke a. N'ihi na 'Oge okpomọkụ m hụrụ n'anya' bụ otu n'ime akụkọ ntorobịa ndị ahụ na-akpakọrịta mgbe niile. Ọ bụ mmegharị nke akwụkwọ Jenny Han na akụkọ a anyị nwere ike ịnụ ụtọ isiokwu ndị dị ka ịhụnanya mbụ kamakwa mmekọrịta dị n'etiti nne na ụmụaka yana usoro oge okpomọkụ na ihe niile ọ na-ahapụ anyị iji mee ka ọ bụrụ ihe kacha mma. . N'ezie, ọ bụrụ na anyị elekwasị anya karị na arụmụka ya, a ghaghị ikwu na ọ bụ triangle ịhụnanya nke otu nwa agbọghọ na ụmụnne abụọ mejupụtara. Ị nwetalarị ya na Amazon Prime na n'ezie, ọ bụ otu n'ime nnukwu onyinye ịmalite ibi ndụ site ugbu a.
Ọdọ Mmiri ahụ
N'etiti usoro okpomọkụ, anyị na-ahụkwa ọdọ mmiri ndị ahụ ka ha nwee ike ịjụ oyi ka anyị kwesịrị. Ọzọ anyị ga-ekwukwa nke ahụ Ị ga-ahụ ya na Amazon Prime na nke a ọ bụ ihe ọchị, nke nwere obere isiakwụkwọ ndị a na-ahụ ngwa ngwa. Anyị na-etinye gị n'obi: Ọ bụ banyere otu nwoke bi ná mba ọzọ ruo ogologo oge, ruo otu ụbọchị o kpebiri ịlaghachi Canada ka ya na nwa ya nwanyị nke ọ hapụrụ ka e kuchiri ya. Ma ọ ghọtara na ọ bụghị ihe niile ga-ama mma ka a tụrụ anya ya, ebe ọ bụ na e nwere ihe nketa nke na-agaghị eme ka a tụrụ anya ya. Ugbu a, ị ga-ahụ ya zuru oke ka ị nwee ike ịchọpụta ka ọ ga-agwụ.
ihe ịma aka okpomọkụ
Ọ bụ usoro ihe omume 10 ma ọ bụrụ na ị na-achọ sọfụ, ị gaghị atụfu ya. Ọ bụ mmalite June mgbe 'Ihe ịma aka Summer' rutere na Netflix. N'ime ya ị nwere ike ịnụ ụtọ odida obodo nke Australia na n'ezie, osimiri ya. Na-echefughị ​​na anyị na-echekwa ihe nkiri ntorobịa ihu ebe ọ bụ na onye na-akwado ya bụ Summer. A chụpụrụ otu nwa agbọghọ na-enupụ isi n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na New York. N'ihi ya, nne ya na-ezipụ ya n'obere obodo. Anyị nwere ike inye ya ohere mgbe niile ịhụ ka akụkọ a dum si agwụ, ọ́ bụghị ya?
Ọzọ, anyị na-anọ na Netflix ka anyị nwee ọ enjoyụ na usoro ọzọ a. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, aha ya na-agwa anyị ọtụtụ ihe karịa ka anyị tụrụ anya ya. Ezigbo ihu igwe na ọrụ okpomọkụ na-eme ka ìgwè ndị na-eto eto mara onwe ha. Anọ ndị ahụ dị nnọọ iche mana ha jikọtara ọnụ n'ihi ụlọ ezumike okomoko na paradaịs agwaetiti. Ya mere, ha bụ ihe zuru oke iji gaa n'ihu ịkụ nzọ na usoro ọzọ nke ga-eme ka oge a dị ọhụrụ. N'oge a, ọ nwere akụkụ 8 na otu oge. Mana ezuru iji nwee ike ịchọpụta ihe nzuzo niile ha na-ezo na kwa mbata nke ịhụnanya. A mmanya nke ga-aga ogologo ụzọ na nke ị na-agaghị echefu. Kedu usoro okpomọkụ ị hụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Usoro okpomọkụ na-enye ume ọhụrụ nke nyiwe na-enye